Izinwele ezinde ezikhanyayo, izipikili ezinamandla ezinempilo, umzimba omncane futhi, ngokuqinisekile, isikhumba esikhanyayo, esihlanzekile, esikhulayo siyisakhi somfanekiso, lapho bonke abesifazane, ngaphandle kokuhlukile, bafuna. Kodwa isimo somzimba nezimo zangaphandle ezingathandeki azivumeli njalo abesifazane ukuba babonakale bephelele. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kosuku olusebenzayo olukhuni nolududuzayo, cishe akusikho isikhathi esisele sokuzinakekela wena . Ngakho-ke, abantu abaningi baphupha ukuthola ikhambi elizokwazi ukuvuselela izinwele, ukuhlanza, ukucwilisa nokondla isikhumba sobuso nomzimba ngezinsimbi ezinomsoco. Futhi kukhona ithuluzi elinjalo. Amafutha kakhukhunathi.
Amafutha kakhukhunathi e-Organic ekunakekeleni isikhumba nokunakekelwa kwezinwele
Amafutha kakhukhunathi e-Organic angacatshangwa ngokuthi "wand-bacillus" kanye nezimonyo ezaziwayo . Lo mkhiqizo uhlanza ubuso, uwusondeza futhi uwondle ngaphandle kokuphazamisa ukulinganisela kwamanoni namanzi. Amafutha afanele isikhumba senkinga - i-lauric ne-capric acids, engxenyeni yalo, ibe nemiphumela yokulwa nokuvuvukala kanye ne-antimicrobial. Ngenxa yalokhu, amafutha kakhukhunathi aphikisana ngokuzikhandla nama-pimples nama-acne.
Ngenxa ye-vitamin E, equkethe amafutha kakhukhunathi, lo mkhiqizo ubaluleke kakhulu ekugugeni, esikhumbeni esikhulayo. Amafutha kakhukhunathi avikela ngokugcwele isikhumba ekubunjweni kwama-radicals mahhala, okuwunqanda ukuqina nokuqina. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwalesi sikhungo kunqanda ukwakheka kwamachashazi ahlotshaniswa neminyaka.
Izinwele nazo zidinga ukunakekelwa njalo, okungahlinzeka ngamafutha kakhukhunathi. Uma usebenzise njalo lo mkhiqizo ezinqeni zakho nokukhwabanisa ihora ngaphambi kokugeza, amathiphu azoyeka ukuwa, ubomvu buyophela, izimpande nezinwele zizoqina, ukulahlekelwa izinwele kuzokwehla.
Ngaphandle kokudla nokuhlanza, ungasebenzisa amafutha omkhukhunathi we-organic for sunburn. Lo mkhiqizo unempahla ehlukile ngesikhathi esifanayo evikela isikhumba ekuchasheni emisebeni yama-ultraviolet enobungozi nokugqugquzela i-tan uniform, enhle, enempilo.
Indlela yokukhetha i-otho kakhukhunathi?
Njengomthetho, lo mkhiqizo ungenziwa ngezindlela ezimbili:
Indlela yokucindezela okushisayo. Le ndlela ikuvumela ukuba usebenzise wonke amafutha avela ku-copra (i-coconut pulp).
Indlela yokucindezela ebandayo. Le ndlela iyinkimbinkimbi, ngaphezu kwalokho, inani lamafutha akhiqizwa ngesikhathi senqubo yokucindezela ingaphansi kakhulu kunenkathi yokucindezela okushisayo. Noma kunjalo, amafutha akhiqizwa ngale ndlela angcono futhi, ngokufanele, ayabiza kakhulu.
Akudingeki ukuthi kuthiwa, amafutha anomsoco (akhiqizwa ngendlela yokucindezela okubandayo) enezindawo ezingapheli zokubuyisela nokuphulukisa. Leli thuluzi lingasetshenziselwa yedwa noma lihlangene nezinyathelo zokulungisa izimonyo ezenziwe ngomumo - ama-creams, ama-masks, ubuso nezinwele. Izimonyo zemvelo, ezenziwe ngesisekelo samafutha kakhukhunathi - ukhilimu, ama-lotions, ama-sprays, ama-scrubs, isobho, njll, zifuna kakhulu.
Abesifazane abaningi abazi ukuthi bangaphi amafutha kakhukhunathi. Ungayenza ezitolo ze-intanethi, nakuzo zonke izimonyo ezinkulu noma ama-pharmacy.
I-Tattoo "Griffins": incazelo. Amathonti amanga abuyele esimweni
Ukubhoboza "smilie" ne "antismyl" ekhaya: izithombe, izibuyekezo, imiphumela
I-Nicotinic acid ebusweni: ukubuyekezwa
"Daiquiri": ethandwa cocktail recipe
Analog "Edarbi" imithi ejwayelekile: Incazelo, imiyalo
Indlela ukugcina tangerines kaNcibijane ukuba fresh
Amaqiniso ethakazelisayo zesimiso sonozungezilanga. Lolu cwaningo amaplanethi we Solar System
Imibono yamaKhomanisi ovulekile